Ana Jehovah Adasefo Wɔ Mbra A Ɔfa Nantsew A Odzi Awar Enyim Ho?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mfantse Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russia Mmum Kasa Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehovah Adasefo gye dzi dɛ ngyinadonsɛm nye ahyɛdze ahorow a ɔwɔ Bible mu no botum aboa hɛn ma yeesi gyinae ahorow a no do bɛba hɛn mfaso na aasɔ Nyankopɔn enyi. (Isaiah 48:17, 18) Nnyɛ hɛn na yɛhyehyɛɛ ngyinadonsɛm nye ahyɛdze ahorow yi, naaso yɛdze bɔ hɛn bra. Susu mbrɛ iyinom mu bi fa nantsew a odzi awar enyim no ho. *
Awar yɛ nkabɔmu a ɔtsena hɔ dabaa. (Matthew 19:6) Osiandɛ Jehovah Adasefo bu nantsew a odzi awar enyim dɛ ɔyɛ anamɔn a obi tu ma okowie awar mu ntsi, yebu no dɛ ɔyɛ enyibersɛm.
Nantsew a odzi awar enyim no wɔ hɔ ma hɔn a woenyinyin a wobotum awar nkotsee. Hɔn a wɔtse dɛm no ‘asõ awar’ anaa mber a hɔn nda ho nkãtse ano yɛ dzen no etwa mu.​—1 Corinthfo 7:​36.
Hɔn a wɔwɔ ho kwan dɛ wɔwar nkotsee na wobotum dze hɔnho ahyɛ nantsew a odzi awar enyim mu. Wɔ Nyankopɔn enyiwa do no, sɛ obi gyaa awar wɔ mbra kwan do a, ɔnnkyerɛ dɛ obotum awar bio, osiandɛ ne gyinapɛn nye dɛ gyedɛ ndwamanyɛ nkotsee na obi botum egyina do egyaa awar na wɔaasan awar bio.​—Matthew 19:9.
Wɔahyɛ Christianfo a wɔpɛ dɛ wɔwar no dɛ wɔnwar hɔn nyɛnko gyedzinyi nkotsee. (1 Corinthfo 7:​39) Jehovah Adasefo bu dɛm ahyɛdze yi dɛ ɔrennkã obi a ɔgye hɛn gyedzi ahorow no to mu kɛkɛ ho asɛm, na mbom ɔrekã obi a ɔdze dɛm gyedzi ahorow yi bɔ ne bra na woenuma no dɛ Ɔdasefo no ho asɛm. (2 Corinthfo 6:​14) Ofi tsetse na Nyankopɔn ama n’asomfo akwankyerɛ dɛ wɔnwar obi a wɔnye no wɔ gyedzi kor. (Genesis 24:3; Malachi 2:​11) Mfaso wɔ dɛm ahyɛdze yi do, dɛ mbrɛ ndɛber yi mu nhwehwɛmufo so ebohu no. *
Ɔsɛ dɛ mbofra tsie hɔn awofo. (Mbɛbusɛm 1:8; Colossaefo 3:​20) Wɔ hɔn a wɔda ho nye hɔn awofo tse no afamu no, hɔn awofo gyinaesi a ɔfa nantsew a odzi awar enyim a wobedzi do no kã dɛm ahyɛdze yi ho. Ibi nye mfe a ɔsɛ dɛ obi dzi ansaana ɔdze noho aahyɛ nantsew a odzi awar enyim mu, nye dza wɔbɛma hɔn ho kwan ma wɔdze hɔnho ahyɛ mu so.
Wɔ Kyerɛwnsɛm no akwankyerɛ ase no, Adasefo no ankasa botum apaw dɛ bi a wɔdze hɔnho bɛhyɛ nantsew a odzi awar enyim mu anaa wɔnnkɛyɛ, nye obi a wɔbɛpɛ dɛ wɔnye no yɛ nhyɛhyɛɛ yi. Iyi nye ngyinadosɛm yi hyia: “Na obiara bɔsoa nankasa n’adzesoa.” (Galatiafo 6:5) Iyi nyina mu no, sɛ ɔba no wɔ nantsew a odzi awar enyim mu a, nyimpa pii fi nyansa mu hwehwɛ afotu fi Adasefo a wɔwɔ suahu na wɔwɔ afofor ho adwempa no hɔ.​—Mbɛbusɛm 1:5.
Ndzeyɛɛ ahorow pii a ɔbatabata nantsew a odzi awar enyim ho no yɛ bɔn a enyiber wɔ mu ankasa. Dɛ nhwɛdo no, Bible no hyɛ hɛn dɛ yɛntwe hɛnho mfi ndwamanyɛ ho. Nnyɛ nda mu nkitahodzi nkotsee na ɔkã ahyɛdze yi ho, na mbom efifidze ahorow bi so a ɔkɔ do wɔ hɔn a wɔnnyɛ awarfo ntamu, tse dɛ obi ne banyin anaa ne basia ho a wɔbɔgor ho anaa wɔbɛtafer, anaaso obi tun a wɔfa. (1 Corinthfo 6:​9-​11) Mpo, hɔn a wɔnnyɛ awarfo a wosusuo hɔnho mu dze kenyan nda ho akɔndɔ no yɛ “efifidze” a ɔnnsɔ Nyankopɔn enyi. (Galatiafo 5:​19-​21) Bible no kasa tsia nkɔmbɔdzi a ɔmmfata a “enyiwusɛm” kã ho.​—Colossaefo 3:8.
Akoma no, anaa dza okenyan obi ma ɔyɛ biribi no yɛ ɔdaadaafo. (Jeremiah 17:9) Obotum ama obi dze noho ahyɛ ndzeyɛɛ bi a onyim dɛ ɔnnyɛ mu. Mbrɛ ɔbɛyɛ a nyimpa beenu a wɔdze hɔnho ahyɛ nantsew a odzi awar enyim mu no akoma renndaadaa hɔn no, ɔnnsɛ dɛ hɔn nkotsee tsew hɔn ho kɛhyɛ beebi. Dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛyɛ ahwɛyie no, ɔbɛyɛ papa dɛ wɔnye anyɛnkofo pa bɔbɔ mu ayɛ adze, anaa wɔma obi kã hɔn ho aber biara. (Mbɛbusɛm 28:26) Ɔsɛ dɛ Christianfo esigyafo a wɔrohwehwɛ awar mu hokafo no hu esian a ɔwɔ mu dɛ wɔfa Intanɛt do hwehwɛ awar mu hokafo no, ne tsitsir no obi a wonnyim no yie a wɔnye no bɛyɛ nhyehyɛɛ no.​—Ndwom 26:4.
^ nky. 2 Nantsew a odzi awar enyim no kã mbusua binom amambra ho, naaso binom hɔndze dze ɔnnkã ho. Bible no nnkã dɛ ɔyɛ nhyɛ dɛ yɛdze hɛnho hyɛ nantsew a odzi awar enyim mu anaadɛ ɔno nye ɔkwan kor pɛr a wɔfa do war.
^ nky. 6 Dɛ nhwɛdo no, asɛm a ɔwɔ nwoma bi a wɔato dzin Marriage & Family Review mu no kãa dɛ, “nhwehwɛmu etsitsir ebiasa a wɔayɛ afa awar a ɔkyɛr ho, (ofitsi mfe 25 kesi 50 na no mboree) no ada no edzi dɛ sɛ awarfo bi kɔ asɔr kor, na hɔn adwen hyia wɔ hɔn som mu gyedzi nye ne nkyerɛkyerɛ ho a, iyinom nye ndzɛmba etsitsir a ɔma awar kyɛr.”​—Ɔfã 38, dza odzi kan, nkyekyɛmu 88 (2005).
Ebɛnadze nye nantsew a odzi awar enyim?
Nantsew a odzi awar enyim yɛ anyɛnkofa biara a ɔma nyimpa beenu dze hɔn adwen si pɛ a wɔpɛ hɔnho no do. Obotum akɔ do aber a nyimpakuw bi ehyia anaa nsumaa mu, wɔ petee mu anaa kukuamu. Ibia wobehyia hɔnho, wɔbɛkasa wɔ fon do anaa wɔdze tɛst mɛsegyi bɔmona hɔnho. Jehovah Adasefo mmbu nantsew a odzi awar enyim dɛ adze a wɔyɛ dze gyegye hɔn enyi, na mbom dɛ anamɔn a enyiber wɔ mu a obi tu ma okowie awar mu.
Fa mona Fa mona Ana Jehovah Adasefo Wɔ Mbra A Ɔfa Nantsew A Odzi Awar Enyim Ho?